April 4, 2021 - ApannPyay Media
ခြေစွယ်ငုတ်သူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ် ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း မြင်ဘူးပါတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ခု ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့ပါဘူး။ ခြေသဲ လေးကလည်း နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး လှပလာပါလိမ့်မယ်။ ဆေးက အဝေးကြီး ရှာစရာမလိုတဲ့တွက် အားလုံးအလွယ်တကူ ပျောက်ကင်းသက်သာနိုင်ပါတယ်။ အိမ်သုံးဆား။ ။ ဟင်းအိုးထဲ ခတ်တဲ့ဆားပါ။ ဆားအနည်းငယ်ကို ခြေစွယ်ငုတ်နေတဲ့ နေရာမှာ ပုံထားပေးပါ။ ရေအနည်းငယ်ကို လက်ညိုးနဲ့ဆွတ်၍ တစ်စက်တည်း သာ ချပါ။ ဆားပုံထားတဲ့ပေါ်မှာ ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆားအရေပျော်ပြီး ဘေးကို စီးကျသွားရင် နဲနဲထပ်ပုံပါ။ ခဲခဲပုံပုံလေး ဖြစ်နေရင် … Read more
သွေးပေါင်ကျတတ်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက် သွေးပေါင်ကျတတ်သူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်နှင့်စားပေးရမယ့်အစားများ… သွေးပေါင်ချိန် ၉၀/၆၀ အောက် ရောက်သွားရင်တော့ သွေးပေါင်ကျတယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျခြင်းဟာ သွေးတိုးခြင်းလိုပဲ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ သွေးပေါင်ချိန်ဟာ ၁၂၀/၈၀ ဖြစ်ပြီး ၉၀/၆၀ အောက် ရောက်သွားရင်တော့ သွေးပေါင်ကျတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျခြင်းဟာ မွေးရာပါ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်ခြင်းနဲ့ ဟော်မုန်း မညီမျှတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး ရေရှည်စွဲမြဲသောက်သုံးတဲ့ ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ မကြာခဏ သွေးပေါင်ကျတတ်သူတွေ သတိထားပြီး လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ရေများများ သောက်ပါ ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း … Read more
ကျောက်သင်ပုန်းရွက်အစွမ်း အံ့မခမ်း ဒါကတော့(Peperomia pellucida)ကျောက်သင်ပုန်းရွက်(သို့) နတ်သမီး ကွမ်းရွက်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ ကျောက်သင်ပုန်းမှ စာတွေကို ပြန်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အလေ့ကျပေါက်သည့် အပင်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပင်မှာ ကင်ဆာရောဂါကို တွန်းလှန်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Antioxidants ပါဝင်တယ်။ ဗီတာမင်စီဓါတ်များတယ်ပြီး ဗီတာမင်အေဓါတ်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့ Beta-carotene ပါဝင်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းဆေးဆရာများကတော့ ဒူလာဆေး၊ အဆစ်မြစ်ရောင် (ဂေါက်ရောဂါ) အတွက် ဒီအပင်ကို သုပ်စားခြင်း၊ ပြုတ်စားခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ဆေးအဖြစ် အသုံပြုပုံများ- (၁) ရင်သားကင်ဆာရောဂါအတွက် အရွက်လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ကို သန့်ရှင်းစွာ ဆေးကြောပြီး ထောင်းကာ ရင်သားပေါ်ကို အရည်သုတ်လိမ်းပေးခြင်း၊ အဖတ်ကို အုံပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကုသပေးလျှင် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ (၂) ထိခိုက်ရှနာ၊ ဒဏ်ရာအမျိုးမ်ျိုး၊ အနာစိမ်း၊ ပြည်တည်၊ ဝက်ခြံနာ၊ … Read more
သမင်ဖြူ(ခေါ်)ခရုသင်းရောဂါအတွက်ကိုယ်တွေ့ပျောက်ခဲ့တဲ့ဆေးနည်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လားရှိုးမှာနေစဉ် ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်လာမှန်းမသိဘဲ သမင်ဖြူ အရေပြားရောဂါ ကျနော်ဖြစ်လာတယ် ။ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုဆိုတာ အစရှာမရဘူး ၊ အစားမှားခြင်းကစတာဘဲလို့သုံးသပ်မိတယ် ၊ အနာကလေးမပေါက်လိုက်နဲ့ ပျောက်တာနဲ့ သမင်ဖြူဖြစ်နေခဲ့တယ် ။ ခြေကလက်ကနေ အကွက်ကလေးတွေစဖြစလာပြီး မျက်နှာနှုတ်ခမ်းလေးတွေပါကူးလာတယ် ။ ဆေးတွွေလည်းစုံနေပြီ မပျောက်ဘူး ၊ ဘယ်ဆရာမှမတတ်နိုင်ဘူး ၊ အပြငး်ထွက်ရင် အကွက်လေးတွေကို သနပခါးလူးပြီးထွက်ရတယ် ။ သူငယ်ချင်း မိိတ်ဆွေတွေလည်းစုတ်တသပ်သပ်နဲ့စိတ်မကောင်းကြဘူး ၊ မန္တလေးကိိုဆင်းတော့ မမကြီးက ကျနော့်အဖြစ်ကိုမြငြ်ပီး ငါ့မောင်ဘဝတော့သွားပါပြိဆိုပြိး ငို်ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ စိိတ်ဓာတ်မကျပါဘူး ၊ အနာသိရင် ဆေးရှိိပါတယ် ။ မမရယ် ငိုမနေပါနဲ့လို့နှစ်သိမ့်လို််က်ပါတယ်၊ ဒါနဲ့ မဖြစ်တောဘူ့း ကိိုယ့်ရောဂါကိုယ်ကုမှဘဲဆိုပြိး ဆေနည်းတွေရှာတယ်၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးနည်းတွေအတိုင်း ဆေးတွေဝယ်တယ် ။ … Read more
သွေးတိုးလို့ စိတ်မညစ်နဲ့တော့ဗျာ ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ… ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ….သွေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူး…. လည်ပင်းတွေအစ်ထလာပြီးစုံးဖမ်းသလိုနတ်မမ်းသလိုလိုနဲ့ ဂေါင်းတွေကိုက် မျက်စိတွေမှုန်ဝါးလာပြီး ခြေထောက်တေလက်တေ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး လေငန်းဖြတ်ဖို ့ချည်လုပ်နေတယ်…. အရင် ၂ ခါလဲ လေငန်းဖြတ်ဖို ့လုပ်လို ဆေးရုံ ပြေးရသေးတယ်….သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ထား…..အခု သွေးမတိုးတော့ဘူး ….. သူပြောတာတော့ ၃ ရက် ဆက်တိုက် မနက်တကြိမ် နေ ့လယ်တကြိမ် ညတကြိမ် ၃ ရက် ဆက်သောက်ရင် အနဲဆုံး ၆လ လောက်ကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားချင်တာစားလို ့ရတယ်ဆိုပဲ….. ကျနော်ကတော့အခုမှသောက်ထာဆိုတော့ သွေးတိုးကျတာပဲသ်ိသေးတယ် ….ဓါတ်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်…. ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရည်အကုန်နဲ့ ဖျော်….အမယ်နည်းရှိသဗျ….. သံပုရာသီးကို တချမ်းခွဲ … Read more
ကျီးပေါင်း ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ ခြေဆစ် လက်ဆစ်နာခြင်းတို့ အတွက်
ကျီးပေါင်း ၊ဂေါက်ရောဂါ၊ ခြေဆစ် လက်ဆစ်နာခြင်းတို့ အတွက် ကျီးပေါင်း​ရောဂါအတွက် အလွန်ကောင်း ၊ဂေါတ်ရောဂါအတွက်လည်း အလွန်ကောင်း ၊ယူဒီးအက်စစ်များသူအတွက်လည်း အလွန်ကောင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်းစတဲ့ လည်ချောင်းရော ဂါအတွ က် လည်း အလွန်ကောင်းလို့ပဲပြောရမှာပါ။ ယူဒီးအက်စစ်များလွန်း၍ ခြေဆစ်လက်ဆစ်ကိုက်ခဲခြင်း ဖူးရောင်ခြင်း များကို နှစ်လုံး သုံးလုံးသောက်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်ကင်းသွားသူ ဒကာက လျှောက်ထား၍ ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးနည်းပြုလုပ်ပုံက ခပ်နုနုသင်္ဘောသီးတစ်လုံးကို ထိပ်ကဓားနှင့်လှီး ၍ အစေ့အနု သင်္ဘောအစေးတို့ကို မဖယ်ရှားပဲ သင်္ဘောသီးအခေါင်းထဲ၌ ကျက်ကျက်ဆူနေသောရေနွေးကို လောင်း ထည့်၍ လှီးထားတဲ့ သင်္ဘောခွန်နဲ့ ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ နွေးနွေးလေးသောက်လည်း ရပါတယ် အေးမှသောက်လည်းရပါတယ်။ သောက်ပြီးရင် ရေနွေးပြန်ထည့် ဤနည်းဖြင့် တနေကုန်သောက်ပေးပါ နောက်နေ့လည်း ဆက်သောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ သင်္ဘောသီး အရွက်တို့ ဆေးဖက်ဝင်ပုံက အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး … Read more
လက်ဖက် နှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး
လက်ဖက် နှင့် ကလေးငယ်များ၏ ကျန်းမာရေး အိမ်မှာ ဟင်းမကြိုက်ရင် မချက်ရင် အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတဲ ့အသင့်စား လက်ဖက်တွေနဲ့ ထမင်းစားနေတာကို တော်တော်များများ တွေ့လာပါတယ်။ကလေး လူကြီး ကျား မ မရွေးတော်တော်များများလည်း ကြိုက်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ကလေးငယ်တွေ အတွက်တော ့လက်ဖက်ဟာ မစားသင့်တဲ ့အစားအစာ တစ်မျိုးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အာဟာရပညာရှင် ဒေါက်တာ ညီညီကျော် ပြောပြတာကို Flemexက တဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာပြောပြတဲ့ မစားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းကတော ့လက်ဖက်ဟာ အူလမ်းကြောင်းမှ သံဓာတ်စုပ်ယူခြင်းကို ပိတ်ပင်လို့ကလေးတွေမှာ သံဓာတ်ချို ့တဲ့ လာတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သံဓာတ်ချို့တဲ့တော ့သွေးအားနည်းရောဂါပါ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ကလေးငယ်တွေမှာ ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးမှု ့ကိုပါထိခိုက်လာစေပြီး ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြော … Read more
ထမင်းမြိန်စေမယ့် ချဥ်ပေါင်ချက်နည်း (၅)မျိုး ‘ မျှစ်ချဉ်ပေါင်ကြော် ” မျှစ်ကို နာရီဝက်ခန့်ပြုတ်ထားပါ။ ပြုတ်ထားတာရရင် မျှစ်ကိုဆယ်ပီး ဓါးဖြင့်လှီး ( သို့ ) ခက်ရင်းဖြင့် ခြစ်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီ ပုဇွန်ခြောက် ငရုတ်ခြောက်အနီတောင့် ထောင်းထားပါ။ ပြီးရင် ဆီသပ်ပါ။ ကြက်သွန်အနံ့မွှေးလာပြီဆိုမှ ချွေထားသော ချဉ်ပေါင်ရွက် ထည့်ပါ။ ငပိစိမ်းစား အနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ချဉ်ပေါင် အရွက်များ အိလာပြီဆို ကျေအောင် ဟင်းမွှေဇွန်းကြီးဖြင့် ချေပေးပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါ။ သကြား ဆား အရသာမှုန့် မျှစ် ထည့်ပါ။ မကြာခဏမွှေပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ပုဇွန် ဝက်ဆီဖတ်တို့ဖြင့်လည်းရောကြော်လို့ရပါတယ်။ မိသားစု Online Cooking Foodstuff ချဥ်ပေါင် စပ်ချဥ်လေး ထမင်းမြိန်လိုက်တဲ့ဟင်းလေး ကြော်ချက်လေးပါ ချဥ်ပေါင် မျှစ် ငပိ … Read more